Wasiir Bayle oo ka hadlay canshuurta iibka ah oo ay dowladda kusoo rogtay Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir Bayle oo ka hadlay canshuurta iibka ah oo ay dowladda kusoo rogtay Muqdisho
Wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane C/raxmaan Ducaale Bayle ayaa si aan ganbad laheyn u difaacay canshuurta iibka ah oo ay dowladda federaalka ka bilawday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Wasiir Bayle oo maanta shir jaraa’id ku qabtay xafiiskiisa ku yaalla magaalada Muqdisho islamarkaana faahfaahin ka bixiyey waxqabadka wasaaraddiisa, ayaa sheegay in sanadkii hore ee 2017-ka uu ahaa sanad aad u wanaagsan, islamarkaana ay sanadkaan rajeynayaan inuu kasii wanaagsanaado.
Sidoo kale, wasiir Bayle oo ka hadlayay canshuurta iibka ah ee lagu soo kordhiyey Hoteelada ku yaalla magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka looga baahan yahay inay bixiyaan canshuurta dowladda, si ay dhaqaalaheeda ugu tashato.
“Waxaa naga go’an inaan sii wadno geedi socodka la xiriira cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya, si taas dowladdu ugu guuleysatana waxay ku xiran tahay in shacabka ay bixiyaan canshuurta”. Sidaas waxaa yiri wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Bayle.
Dhinaca kale, wasiir Bayle ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho inay bixiyaan canshuurta, si ay dowladda uga maaranto lacagaha deymaha ah ee sii kordhaya.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa magaalada Muqdisho haatan si weyn looga hadal haayaa canshuurta lagu kordhiyay iibka, hoteelada qaarkood, iyadoo sidoo kale la arkay canshuur la dul saaray Shaaha, Cabitaanka, Cuntada, iyadoo koobka shaaha ah ama cabitaanka ay la socoto 5% oo canshuur ah.